Petrogenesis: ihe ọ bụ, njirimara na ụdị usoro okwute | Netwọk Mgbasa Ozi
Portillo nke German | 25/03/2021 11:26 | Geology
Taa, anyị ga-ekwu maka otu ngalaba nke geology na-elekwasị anya n'ịmụ banyere nkume, mbido, ngwakọta na anụ ahụ na kemịkalụ yana nkesa ala ụwa. A na-akpọ alaka ụlọ ọrụ a nke ala. Okwu petrology sitere na petro bara uru ihe nkume putara na site na logos ihe ọmụmụ pụtara. E nwere ọdịiche dị na lithology nke na-elekwasị anya n'okwute mejupụtara ebe enyere. Na petrology ndị petrogenesis. Ọ bụ banyere mmalite nke nkume.
N'isiokwu a, anyị ga-agwa gị njirimara niile, mmalite na ọmụmụ banyere petrogenesis.
2 Mmalite nke petrology na petrogenesis
3 Nnyocha ọmụmụ Petrology
4 Petdị petrogenesis
E kere Petrology n'ọtụtụ ebe pụrụ iche dabere n'ụdị nkume a ga-amụ. Ya mere, e nwere ngalaba abụọ nke nkewa nke ọmụmụ ihe bụ petrology nke sedimentary nkume na petrology nke igneous rocks na metamorphic. Ihe ejiri mara petrology nke mbụ mara aha nke abụọ bụ petrology siri ike. Enwekwara alaka ndi ozo di iche iche dika ebumnuche a choro maka imu okwute. Enwekwara ụdị ihe osise maka nkọwa nke nkume na petrogenesis iji chọpụta mmalite ha.
Petrogenesis bụ akụkụ dị mkpa ebe ọ bụ mmalite na mbido nkume. Dika enwere uzo ozo nke etinyere na ihe ndi ndu. Ekwesiri iburu n'uche na imata ihe omuma nke ihe okike nke nkume nwere ike iji mee ihe n'ọtụtụ ebe dikwa oke nkpa, dika iwu na iweputa ihe ndi mmadu.
Yabụ, ngalaba sayensị a dị ezigbo mkpa ebe ọ bụ na nkume bụ nkwado bụ́ isi nke akụkụ ahụ mmadụ. Ọ dị mkpa ịmara usoro, mmalite na ngwakọta nke nkume ndị anyị na-etinye ma wuo nrụrụ anyị. Tupu ịmalite ịrụ ụdị ụlọ ọ bụla, akụrụngwa, wdg. A ga-ebu ụzọ mụọ ụdị nkume ndị dị na ntọala nke ihe owuwu ahụ iji gbochie enwere ike ịdaba, idei mmiri, ọdachi, mbuze, wdg. Nkume bụkwa ihe dị mkpa maka ọtụtụ ọrụ ụlọ ọrụ mmadụ.
Mmalite nke petrology na petrogenesis
Mmasị na nkume dị kemgbe mmadụ. Ọ bụ ihe dị mgbe niile na gburugburu ebe obibi nke mere ka teknụzụ zụlite kemgbe oge ochie. Ejiri okwute rụọ ngwa ọrụ mmadụ mbụ wee mee ka ọ dịrị ndụ n’oge niile. A maara ya dị ka Oge Nkume. Onyinye iji mara iji ojiji nke nkume abụrụla nke ọma na China, Gris na ọdịbendị Arab. Westernwa ọdịda anyanwụ na-eme ka ihe odide nke Aristotle pụta ìhè ebe ha na-ekwu maka uru ha bara.
Agbanyeghị, ọ bụ ezie na ụmụ mmadụ na ụwa arọọla ọrụ kemgbe ụwa, mmalite petrology dị ka sayensị nwere njikọ chiri anya na mmalite nke ala. Geology bụ sayensị nne na-eme ka ọ sie ike na narị afọ nke iri na asatọ mgbe ụkpụrụ ya niile malitere. Petrology maka na site na esemokwu sayensị nke malitere n'etiti mmalite nkume. Site na esemokwu a, ogige abụọ pụtara nke a maara dị ka ndị Neptunists na Plutonists.
Neptunists bụ ndị na-arụ ụka na nkume sitere na sedimentation nke sedimenti na kristalization nke mineral site n'oké osimiri oge ochie nke kpuchiri ụwa dum. N'ihi nke a, ejiri amara nke ndị Neptunist mara ha, na-ezo aka na chi Rome nke oke osimiri Neptune. N'aka nke ọzọ anyị nwere ndị Plutonists. Ha na-eche na mbido okwute na-amalite site na magma na ala ala di omimi nke ụwa anyị nke oke okpomọkụ kpatara. Aha ndị Plutonist sitere na Chi Rome nke ifo ụwa Pluto.
Ihe omuma nke oge a na mmepe nke teknụzụ na-enye anyị ohere ịghọta na ọnọdụ abụọ ahụ nwere ike inwe nkọwa gbasara eziokwu. Ma ọ bụ na nkume ndị na-edozi ahụ na-ebilite site na usoro metụtara nkwenkwe nke ndị Neptunist nwere, ebe ugwu mgbawa, nkume na-ada ụda na nkume metamorphic sitere na usoro nke dabara na arụmụka ndị plutonists.
Nnyocha ọmụmụ Petrology
Ozugbo anyi matara ihe mmalite na onodu di iche iche banyere ihe ndi ozo bu, anyi ga ahu ihe ebumnuche omumu a. Ọ na-ekpuchi mmalite nke nkume na ihe niile metụtara usoro ha. Ha gụnyere mmalite, usoro ndị na-emepụta ya, ebe dị na lithosphere ebe etolitere ha na afọ ha. Ọ bụkwa ọrụ maka ịmụ ihe ndị mejupụtara ya na nke anụ ahụ na nke kemịkal. The ikpeazụ dịghị obere mkpa ebe ọmụmụ bụ nkesa na petrogenesis nke nkume na ụwa jikọrọ ọnụ.
N'ime ihe banyere ihe omimi, a na-amu kwa ihe omumu nke ihe ndi ozo. Ha niile bụ nkume ndị ahụ sitere na mbara igwe. N’ezie, a na-amụzi nkume ndị sitere na meteorites na ọnwa ugbu a.
Dịka anyị kwurula na mbụ, enwere ngalaba dị iche iche nke sayensị a ma kesaa ha na usoro 3 petrogenesis nke na - eweta okwute: sedimentary, igneous and metamorphic rocks. Yabụ, dabere na mpaghara ebe mbido ụdị nkume ọ bụla dị, enwere alaka petrology abụọ:
Ọpụpụ: dị n’ịmụ banyere nkume ndị ahụ nile sitere n’ala ala mmiri ndị kasị mie emie. Nke ahụ bụ, ọ bụ ọrụ ya maka ịmụ banyere nkume sedimentary. A na-etolite ụdị nkume ndị a site na mkpakọ nke sedimenti mgbe ha debechara ma na-ebugharị ha site na ndị na-ahụ maka ọdịdị ala dịka mmiri ozuzo na ifufe. A na-etinye nsị ndị a n'ime ọtụtụ nde afọ. Karịsịa, ọ na-eme na ọkwa dịkarịsịrị ala dị ka ọdọ mmiri na oke osimiri. Ma ọ bụ na ọkwa ndị na-esochi ya na-akụri, na-egbochi sedimenti ahụ site na ọtụtụ nde afọ.
Akara: Ọ bụ ya na-ahụ maka ịmụ ihe banyere ụdị nkume ndị etinyere n’ime ala miri emi nke prọtị na uwe elu ụwa. N'ebe a, anyị nwere nkume na-acha ọkụ ọkụ na nke plutonic, nkume ndị dị egwu. N'ihe banyere oké nkume, ha na-ebili n'ihi nrụgide dị n'ime site na mgbawa na oyi, na-akpụ nkume. Ọ bụrụ na ha abịa n’elu ugwu mgbawa, ha bụ ugwu mgbawa. Ọ bụrụ na ha sitere n'ime ime ha bụ nkume plutonic. Nkume ndị a na-akpọ Metamorphic sitere na nkume dị egwu ma ọ bụ nke na-edozi ahụ nke e doro nrụgide na ọnọdụ okpomọkụ dị ukwuu. Ha bụ nkume nke ụdị abụọ a na-etolite na omimi miri emi. Ọnọdụ ndị a niile na-agbanwe mgbanwe n'usoro ya na ngwakọ ya.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere petrogenesis na ụdị ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Geology » Petrogenesis